? Accounting နယ်​ပယ်​မှာ အခုမှ စလုပ်​မည့်​သူများ
?အလုပ်​ခွင်​တွင်​ Accounting ဆိုင်​ရာ ထပ်​မံသိချင်းသူများအတွက်​ ရည်​ရွယ်​ပါတယ်​
✔လုပ်​ငန်းခွင်​တွင်​ အသုံးပြု​နေ​သော စာရွက်​စာတမ်းများ??
?-cash book ​ရေးသွင်းပုံ
?-payment list စာရင်းသွင်းပုံ
?-stock (Inventory) ကုန်​ပစ္စည်း အဝင်​ အထွက်​စာရင်း
?-TAX Knowledge အခွန်​ပညာဆိုင်​ရာများ
?-Motivations Training များ
✔ -customer service Trainning,?
​ကျောင်းမှာ test 5ကြိမ်​ ​ဖြေဆိုရပါတယ်​ 5ကြိမ်​မှာ အမှတ်​အများဆုံးရရှိသူများ ​ကျောင်းတက်​မှန်​သူများကို အမှတ်​တရ ဒိုင်းဆုများနှင့်​ ချီးမြှင့်​​ပေးမှာလဲ ဖြစ်​ပါတယ်​ ??
← 2019-08-15 08:30:13 , Please admin LCCI level1+2 နှ… 2019-08-20 20:34:17 , စာရင်းပညာနဲ့ပတ်​သက်​သမျှ shar… →